Zithini iindidi zeWebhu (ziMnyama, zinzulu, umphezulu, kwaye zicacile)? | Martech Zone
Asisoloko sixoxa ngokhuseleko kwi-Intanethi okanye Web Dark. Ngelixa iinkampani zenze umsebenzi olungileyo wokukhusela uthungelwano lwangaphakathi, ukusebenza ekhaya kuye kwavula amashishini kwizoyikiso zokungena kunye nokugenca.
I-20% yeenkampani zichaze ukuba bajongane nokophula umthetho ngenxa yomsebenzi okude.
Ukunyamezela ekhaya: Impembelelo ye-COVID-19 kukhuseleko lweshishini
Ukukhuseleka kwengqondo akuselulo uxanduva lwe-CTO kuphela. Kuba ukuthembela yeyona mali ixabisekileyo kwiwebhu, kubalulekile ukuba abaphathi bezentengiso bakhe ulwazi lwabo ngomngcipheko kunye nendlela yokulawula nayiphi na imiba yobudlelwane noluntu enokuthi ilandele ukuwa. Kananjalo, kunye namaqela entengiso asebenza ukude ngedatha yabathengi exabisekileyo… ithuba lokophula ukhuseleko lenyuke kakhulu.
Iindidi zeWebhu enzulu
I-Intanethi yahlulahlulwe yangamacandelo ama-3 ngokusekwe kwindlela efikeleleka ngayo ulwazi:
Cima iWebhu okanye iWebhu engaphezulu -Ummandla we-Intanethi uninzi lwethu luqhelene nawo, oku kufikeleleka esidlangalaleni ngamaphepha ewebhu, ubukhulu becala afakwe kwiinjini yokukhangela.
Yonke into esinokuyifumana kwiinjini yokukhangela yenza i-4 ukuya kwi-10% yewebhu.
IWebhu eNzulu -Iwebhu enzulu yimimandla ye-Intanethi efihliweyo eluntwini kodwa engenzelwanga imisebenzi eyingozi. I-imeyile yakho, umzekelo, yiWebhu enzulu (ayikhombiswanga ziinjini yokukhangela kodwa ifikeleleke ngokupheleleyo). Amaqonga entengiso e-SaaS, umzekelo, akhiwe kwiwebhu enzulu. Bafuna ungqinisiso ukufikelela kwidatha ngaphakathi. I-96% ye-Intanethi yiWebhu enzulu.
Web Dark -Kwi IWebhu eNzulu yimimandla ye-Intanethi efihliweyo ngabom nangokukhuselekileyo kwimbonakalo. Yindawo yewebhu apho ukungaziwa kubaluleke khona ukuze ulwaphulo-mthetho luxhaphake. Idatha eyaphuliweyo, ulwaphulo-mthetho olungekho mthethweni, kunye nemithombo yeendaba engekho mthethweni inokufumaneka, ithengwe kwaye ithengiswe apha. Sele zikhona iingxelo ze Izitofu zokugonya ze-COVID-19 ziyathengiswa kwiWebhu emnyama!
Ukucaciswa kweWebhu emnyama
Kubalulekile ukuba uxele ukuba iWebhu eNtsundu ayisiyonto yolwaphulo mthetho kuphela ... ikwaxhobisa abantu ngokungaziwa. Kumazwe athintela intetho yasimahla okanye abeke esweni unxibelelwano lwabemi bawo, iWebhu eMnyama inokuba yindlela yabo yokungavavanywanga kunye nokufumana ulwazi olungasasazwanga okanye olusetyenziswe ngurhulumente. I-Facebook, umzekelo, ikwafumaneka ngeWebhu emnyama.
Liqhezu elincinci labasebenzisi kwihlabathi liphela (∼6.7%) abanokuthi basebenzise iWebhu yeWebhu ngeenjongo ezimbi ngosuku oluqhelekileyo.
imvelaphi: Izinto ezinobungozi ezinokubakho kwiqela lezinto ezingaziwayo eTor ngokungafaniyo kumazwe asimahla
Kwilizwe lasimahla elinentetho yasimahla, ayisiyondawo apho umntu kufuneka abekhona, nangona kunjalo. Kule minyaka ingamashumi amathathu ndisebenzile kwi-Intanethi, andikaze ndibenaso isidingo sokundwendwela iWebhu eMnyama kwaye ngokuqinisekileyo ngekhe.
Babenza njani abasebenzisi kwiWebhu emnyama
Olona hlobo luxhaphakileyo lokufikelela kwiWebhu eMnyama kukusebenzisa Inethiwekhi yetor. I-Tor imfutshane Umzila we-anyanisi. Tor ngumbutho ongenzi nzuzo ophanda kwaye uphuhlise izixhobo zabucala kwi-Intanethi. Izikhangeli zeTor ziyayiguqula imisebenzi yakho ekwi-Intanethi kwaye usenokufuna ukumenywa ukuba ungene kwiindawo ezithile .onion kwiWebhu emnyama.
Oku kufezekiswa ngokusonga lonke unxibelelwano kumanqanaba amaninzi okubethela ahanjiswayo kwiindawo ezininzi zokuhamba. Unxibelelwano lweTor luqala ngokungakhethiyo kwenye yeendawo zokungena esidweliswe esidlangalaleni, igcwala ukuba ukugcwala kudluliselwe ngokungakhethiyo, kwaye ekugqibeleni isombulule isicelo sakho kunye nempendulo ngokuphuma kwindawo yokugqibela.
Kukho neendawo zokukhangela izixhobo nakwiWebhu emnyama. Ezinye zinokufikeleleka ngecandelo lesikhangeli esiqhelekileyo… ezinye zii-Wiki-style zemikhombandlela eziqokelelwe ngabasebenzisi. Abanye basebenzisa i-AI ukuchonga nokukhuphela ulwazi olungekho mthethweni… abanye bavulelekile ukwenza isalathiso sayo yonke into.
Ukubeka iliso kwiWebhu emnyama
Uninzi lweedatha zolwaphulo-mthetho ezithengiweyo nezithengiswayo kwiwebhu emnyama ziphuliwe iziseko zedatha, iziyobisi, izixhobo kunye nezinto zomgunyathi. Abasebenzisi basebenzisa i-crytpocurrency ukwenza yonke intengiselwano yemali isasazeke kwaye ingaziwa.
Iibhranti azifuni ukufumana idatha yazo eyaphukileyo kwiWebhu eMnyama… yiphupha elibi le-PR. Nazi ukubeka esweni iwebhu emnyama Izisombululo phaya zeemveliso kwaye kusenokwenzeka ukuba sele ubekwe esweni yiminye imibutho ngolwazi lwakho lomntu olufumanekayo.
Ngapha koko, xa ndisebenzisa i-iPhone yam ukungena kwisiza kunye nokugcina iphasiwedi kunye ne-Keychain, Apple wandilumkisa xa elinye lam lamagama agqithisiweyo lafunyanwa kusophulwa umthetho ... kwaye icebisa ukuba itshintshwe.
Gcina yonke isoftware yakho ihlaziyiwe, hayi nje isoftware yakho yokulwa intsholongwane.
Sebenzisa amagama okugqitha amaninzi-awunalo igama eligqithisiweyo kuyo yonke into. Iqonga lolawulo lwegama lokugqitha njenge Dashlane isebenza kakuhle koku.
Sebenzisa i-VPN- iinethiwekhi zikarhulumente ezingenazingcingo zikarhulumente zinokungakhuseleki njengoko ucinga. Sebenzisa Software yeVPN ukuseka unxibelelwano olukhuselekileyo lwenethiwekhi.
Jonga lonke useto lwakho lwabucala kwiiakhawunti zakho zemidiya yoluntu kwaye wenze izinto ezimbini okanye ukungena kwezinto ezininzi naphi na apho unakho.
Andinayo iakhawunti enye ebalulekileyo ekungafuneki ukuba ndingenise ipassword yam emva koko ndifumana ibinzana lesibini lokuthumela umyalezo kwifowuni yam okanye ndikhangele phezulu kusetyenziswa i-mobile authenticator app. Oko kuthetha ukuba, ngelixa i-hacker inokufumana igama lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo, kuya kufuneka babe nokufikelela kwifowuni yakho ukuze bafumane ibinzana lokugqitha ngomyalezo obhaliweyo okanye ngenkqubo yokuqinisekisa.
Jonga isitshixo okanye i-HTTPS kwibhrawuza yakho-ngakumbi xa uthenga kwi-Intanethi. Olo luphawu lokuba unxibelelwano olukhuselekileyo, olunoguqulelo oluntsonkothileyo phakathi kwesikhangeli sakho kunye nendawo ekuyiwa kuyo. Oku ngokusisiseko kuthetha ukuba umntu olala ngaphakathi kwinethiwekhi yakho akakwazi ukubona ulwazi olugqitha emva naphambili.
Sukuvula okanye ukhuphele uncamathiselo kwiidilesi ezingaziwa ze-imeyile.
Sukucofa nakuphi na amakhonkco ngaphakathi kwemiyalezo ye-imeyile ukuba awumazi umthumeli.
Qinisekisa ukuba i-VPN yakho kunye ne-firewall ziyenziwa.
Yiba nomda osetiweyo kwikhadi lakho letyala kwimicimbi ye-Intanethi.
Ukuba uyishishini kwaye wazisiwe ngolwaphulo lwedatha kunye nolwazi olufunyenweyo kwiWebhu emnyama, sebenzise i Isicwangciso sonxibelelwano seengxaki zonxibelelwano ngokukhawuleza, yazisa abathengi bakho ngokukhawuleza, kwaye ubancede ukunciphisa nayiphi na ingozi yomntu.
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa amakhonkco obulungu beenkonzo zangaphandle kweli nqaku.
tags: Iicartwright solicitorscacisa iwebhuibomnyamawebhupasswordukhuselekoUmphezulu webuthungelwano lwe-anyanisityikityainethiwekhi yetorukuqinisekiswa kwezimbiniVpnIsoftware ye-vpnYintoni iyintoni ecacileyo kwiwebhuyintoni ubumnyama webyintoni iwebhu enzuluyintoni iwebhu yomphezulu
Ubumnyama beWebhu ngokwenene buyinxalenye ye-Intanethi